How to buy PR9 backlinks?
Kuwanda kwemotokari uye kunze kwekune zvinhu zvinhu zviviri izvo chero mwene we webhusaiti anofungisisa asati apedzisa nezvekubudirira kwewebhu yake. Nzvimbo yebhuroji isina nguva dzose inoyerera inetso haigoni kuonekwa seichibudirira, uye nzvimbo yewebhu isina kutendeuka kwepamuti haigoni kuvepo zvachose.
Ngatifungei mamiriro ezvinhu aunofanira kusarudza pakati peP PR nzvimbo uye nechekuita zero kufamba uye pasi PR nzvimbo ne2000 vashanyi vemazuva ose. Uchasarudza chii? Iwe unogona kusarudza dofollow link kubva kumusoro PR site, kana nofollow link kubva pasi PR site - software development company websites. Zvechokwadi, zvakaoma kwazvo kusarudza pakati pezvizvi zviviri zvakasiyana. Kana iwe uchienda kune nhamba, iwe uchawana matani emotokari, uye kana iwe uchienda kundoitevera, iwe uchawana kuwedzera kwezvikwata.
Zvakakosha kunzwisisa mutsauko pakati pezvikwata zve dofollow uye zvemashure. Kushamwaridzana nemateji asina kutevera tsvagai kutsvaga injini isingatevedzeri nzvimbo yako kuburikidza nekubatanidza kana kuti kudzivisa kusangana kwejusi inoyerera kwairi. Kushamwaridzana ne tag dofollow, mumutauro wavo, tsvagai tsvaga kutsvaga kutevera bhajidhi yako kana kugovera peji rank juice newe.
Webmasters vanowanzosiya maitiro pane dofollow blogs nekuda kwekukosha kwekutsvaga injini. Kuita kwakadaro kwakaita kuti pave nehuwandu hwemhinduro dze spam. Ndicho chikonzero chikamu chikuru cheblogs hazvina maturo mumazuva edu.
Chii chinonyanya kukosha motokari kana kumashure uye nzira yekuwana nayo maviri?
Maitiro emigwagwa anobatsira
Pasina mubvunzo, motokari ndiyo inonyanya kudikanwa yebhizimisi rose sezvo iyi ndiyo nzira iyo vanogona kuwana nayo yakakwirira kudzoka pamari. Bvunza iwe mubvunzo nei wakavaka bhizinesi rako rekuInternet? Mhinduro yacho kazhinji ichave yakafanana - kuwana mamwe magwara uye kuishandura mubhadharo. Uyezve, kuwedzerwa mumugwagwa kunowedzera mararamiro ako paIndaneti uye inosimbisa hutano hwako hwehupfumi. Iwe unogona kusimbisa kufamba kwako mumitambo yemagariro evanhu nguva dzose. Uye shure kwaizvozvo, iyo yakashambadzira kufamba kwako, inowedzera mari yako. Zvisinei, pane chimwe chinhu chakakosha chemigwagwa - haisi yekusingaperi.
Ichokwadi chinonyatsozivikanwa kuti backlink inouraya mukati memhando ipi zvayo yekutsvaga injini yekusimudzira. Kuwedzera mu backlinks kunokupa imwe yepamusoro pakutsvaga peji yezvitsvaga kukurudzira kutengesa kwako. Iyo yakakwirira iwe yepamusoro, iyo inonyanya kukosha vatengi ichawana ruzivo pamusoro pekodhi yako. Zvimwe zvinonzi backlink zvinogona kudonhedzera zvachose, zvichikupa nekusingaperi kwemigwagwa inoyerera. Zvisinei, pasinei nehutano hwehutano hwako hunosvika, Google inogona kupa mubairo kana kuvhara nzvimbo yako. Kana iyi inoona hukama hwako husingawanikwi zvakaenzana, uchawana chirango chakakomba chinogona kuderedza kufamba kwako uye kutengesa.
Ndicho chikonzero, zvakakosha kushanda mumugwagwa, kwete nekuda kwemashure ekutsvaga kuti uwane ruzivo rwemotokari kuenda kune yako yepaiti, iwe uchafanira kuvaka mashizha asina kupinda chero zvakadaro. Saka, kana iwe uchida backlinks, zvino shandisa magwara.
Ungatenga sei PR9 backlinks?
Tsvaga yewebhu yakadai seWeboutout, Alexa, Quantcast, uye Aboutdomain inogona kuva yakanakisisa yekuwana zvakakosha kumashure pasina nguva. Kuti uwane mawebsite akaita saizvi, unogona kungofambisa tsvakurudzo yekutsvaga pakati pezvikwata mu niche yako. Nzvimbo dzeWebhu dzinokonzera tsvina nzvimbo idzi nguva dzose, ndicho chikonzero iwe mukana wako wekutora nzvimbo yako yakanyorerwa nokukurumidza. Tumira iwe web source kune dzimwe dzakawanda dzezviongorori zvidzidzo, uye iwe uchacherechedza zvikwata zvinowedzera pasi pemaminitsi makumi maviri nemaviri.